Qinaado Haawiittimma Hojjuwa
Doorantino haawiittimmootiraqinaado haawiittimma hojjuwa gumulallo. Qinaado hawiittimmate hojja haawiittimmate giddo jawiidi borangichu bikka aana irkiranno. Babbaxxino bikkote uduunnicho horoonsira dandaatto.
ledote foonqe jawiidi fikiimi mereero hawiittimmate giddonna bisiccote dannubbara ledote foonqe qineessanno.
Qinaado hawiittimma hojjaragadete hornyo wonawa qolanno.
Title is: Qinaado Haawiittimma Hojjuwa